Del.icio.us Ntinye maka Firefox | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 14, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Kedu ihe bụ ịdenye aha ọha? Ọ bụrụ n ’azịza ya… gaa na paragraf na-esonụ. Ọ bụrụ na ịmeghị, ọ bụ naanị ụzọ maka ndị ọrụ iji chekwaa yana kekọrịta njikọ edenyere na ibe ya. Del.icio.us bụ ọmarịcha ọrụ na - enye gị ohere ịkekọrịta ma 'kpado' njikọ ndị ahụ. Gingmepụta njikọ gị na-enye gị ohere ịchọta njikọ ị na-achọ iji interface Del.icio.us.
Abụghị m nnukwu onye ofufe nke Del.icio.us weebụsaịtị, mana m bụ onye na-akwado ihe mgbakwunye ha niile. You'll ga-ahụ wijetị WordPress maka Del.icio.us a na-eburu na peeji nke m (si na Automattic jiri ngwa wijetị sidebar). Nakwa ị ga-ahụ ya agwakọtara na ndepụta m n'iji ya Feeburner si Link Splicer.
Ihe kacha amasị m nke Del.icio.us, bụ Firefox Plugin. Rịba ama na onyonyo dị n'okpuru, agbakwunyela m bọtịnụ "Kpido" na adreesị m. Mgbe ị pịrị bọtịnụ ahụ, ọ na-apụta ụdị dị mma ị nwere ike mejupụta maka nkpado na ịchekwa URL ahụ na ọbá akwụkwọ Del.icio.us gị.
Otu obere mma ị nwere ike ọ gaghị ama: Ọ bụrụ na ị pụta ìhè ụfọdụ ederede na ibe wee pịa "Kpido", ọ ga-ezipụ ederede pụtara ìhè na mpaghara ndetu! Nice obere atụmatụ na timesaver! Nke a bụ nseta ihuenyo n'okpuru: